Chautari Daily » सन्नी लियोनी नेपाल आउँदै
काठमाडौं, ४ भदौं / बलिउडकी अभिनेत्री सन्नी लियोनी विस्तारै नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग पनि जोडिन थालेकी छन् ।
उनले पहिलो पटक नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’ को ‘आजको शाम’ बोलको गीतमा ठुम्का लगाएकी छन् । दुई महिना अगाडि यूट्युब रिलिज भएको यो गीतलाई अहिलेसम्म ४० लाखभन्दा बढीको नजर परिसकेको छ । नेपाली ३ करोड बुझेर सन्नीले यो गीत गरेको निर्माण टिमले बताएको छ ।
‘नमस्ते नेपाल । म सन्नी लियोनी । मैले अभिनय गरेको नेपाली फिचर फिल्म ‘पासवर्ड’ को प्रमोसनल इभेन्ट र प्रिमियरमा सहभागी हुन म सेप्टेम्बर ११ मा नेपाल आउँदैछु’, उनले भिडियोमा भनेकी छन् । सन्नीले फिल्म निर्माण गरेको ब्यानर एबी इन्टरनेसनललाई सफलताको शुभकामना पनि दिएकी छन् । उनी तीन दिन नेपाल बस्ने कार्यक्रम छ ।
फिल्मको प्रिमियरमा सहभागी हुनु पर्ने सर्तसहित निर्माण टिमले सन्नीलाई गीतमा नाच्नका लागि महँगो पारिश्रमिक तिरेको थियो । उनी शर्त बमोजिम नेपाल आउने भएपछि फिल्मको प्रिमियरका लागि विशेष तयारी थालिएको छ । यो फिल्ममा उनको आइटम नृत्यसँगै अभिनय पनि रहेको बताइएको छ । फिल्मको अघिकांश छायांकन लण्डनमा भएको हो ।
अनुप विक्रम शाही, रविन्द्र झा, बुद्धि तामाङ, धिरेन शाक्य, विक्रम जोशी, छुल्ठिम गुरुङलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको फिल्मलाई हिरल जोशी र अमित बस्नेतले मिलेर निर्माण गरेका हुन् । अंकित गौतम कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा अजित के. थापा सहनिर्माताको रुपमा रहेका छन् । सौरभ लामाले खिचेको फिल्मका निर्देशक सम्राट बस्नेत हुन् ।
प्रकाशित मिति ४ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:१८
लोकबहादुर र भाइ नरेशलेे यस्तो बयान दिएपछि अन्य ४ जना अनुसन्धानमा तानिए
संखुवासभा घटना रहस्यमय बन्दै : थप चार जना प्रहरी नियन्त्रणमा
घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ : कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्